प्रदेश ५ : पिसिआर मेसिन जडान भयाे, सञ्चालनमा आएन – Health Post Nepal
प्रदेश ५ : पिसिआर मेसिन जडान भयाे, सञ्चालनमा आएन
२०७७ वैशाख ३ गते १३:५२
‘होटलका २८ हजार कोठा क्वारेन्टाइनमा बदल्न तयार छौं’
स्वास्थ्यमा प्रदेश ५ सरकारले दावी गरेका दश उपलब्धि
सरकारले पिसिआरको माध्यमबाट स्वाब परिक्षणको दायरा फराकिलो पार्ने भनिरहेको बेला प्रदेश ५ मा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को स्वाब परिक्षण नै रोकिएको छ। स्वाब लिने सामग्री (भिटिएम) अभाव हुँदा स्वाब परिक्षण रोकिएको हो ।
भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले स्वाब लिने सामग्री सकिएको हुँदा बिरामीको स्वाब लिन नसकिएको बताए। ‘शंकास्पद बिरामीको स्याम्पल लिन रोकिएको छ’ डा. थापाले भने ‘अहिले हामीकहाँ तीन जना बिरामी हुनुहुन्छ ।’
उनका अनुसार बाँकेमा स्थापना भएको पिसिआर मेशिन पनि सामग्री अभावमा संचालनमा आउन सकेको छैन् । चार दिन अघि जडानका काम सकिएको भएपनि सामग्री र जनशक्ति नआएपछि परिक्षणको काम अघि नबढेको हो ।
प्रदेश ५ का जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले भिटिएम अभाव नै भइसकेको अवस्था नभएपनि प्रयाप्त मात्रामा भने नभएको तर्क गरे । डा. गिरीले पिसिआर मेशिन संचालनमा चाहिने प्रयोगशालाका सामग्री र जनशक्ति अभाव हुँदा जडानका काम सकिएपनि संचालन हुन नसकेको बताए । उनले ठूलो पिसिआर मेशिन संचालन हुन नसकेपपछि अहिले पोर्टेबल पिसिआर मेशिन मात्रै संचालन गरिएको र दैनिक रुपमा १०/१२ वटा स्याम्पल परिक्षण भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले ल्याबका सामग्री नभएपछि भैरहवा र नेपालगञ्जमा नयाँ जडान गरिएको पिसिआर मेशिन संचालनमा आउन नसकेको बताए। ‘सामग्री अभाव भयो’ मन्त्री बरालले भने, ‘हतार हतार जडान गरी तयारी अवस्थामा रहदा पनि परीक्षण सुरु गर्न सकिएन।’
प्रदेश ५ मा अहिलेसम्म २१४ जनाको स्वाब लिइएकोमा २०१ जनाको रिर्पोट आइसकेको छ भने १३ जनाको आउने क्रममा छ । आएका सबै रिर्पोट नेगेटिभ छन् । त्यसैगरी १२०७ जनाको र्पिड टेष्ट लिइएकोमा सबै जनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद कुमार गिरीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोरोना प्रदेश ५ मा रहेका ४ वटा आइसोलेसन अस्पतालमा अहिले पनि १६ जना व्यक्ति भर्ना छन् भने आइसोलेसन बेडमा १२ जना व्यक्ति रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशमा १ हजार ६ सय ४६ व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा छन् ।
दाङको बेलझुण्डीमा स्थापना गरिएको आइसोलेसन अस्पतालमा ५ जना बिरामी रहेकोमा अहिले ति बिरामीको स्वाब लिन पुग्ने ५ वटा मात्रै किट्स छ । बिरामी थपिए र त्यहाँ सामग्री नगए आजदेखि स्याम्पल लिने काम रोकिने स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्य सुपरभाइजर कुशल भण्डारीले बताए ।